Azonao atao izao ny misintona ny Chakra 2013.02 “Benz” | Avy amin'ny Linux
Ny famakiana ny RSS-ko dia hitako amin'ny alàlan'ny Bilaogin'i Marcel izay afaka andro vitsivitsy dia azonao sintonina Chakra 2013.02 "Benz", fizarana mpomba an'i KDE izay manana anarana anarana taorian'ny injenieran'ny fiara mpamokatra alemana (eny, ilay miaraka amin'i Mercedez Benz).
Ny fisongadinana ho ahy amin'ity kinova ity dia tsy isalasalana fa ny fampidirana KDE 4.10 ary ny Zavakanto nohavaozina izay avy amin'ny asa tsara vitan'i Malcer, ary koa ny fanatsarana hafa momba ireo rindranasa tafiditra ao.
Manokana, rehefa avy namaky ny fidirana nosoratan'ilay namantsika tao amin'ny bilaoginy, ary Ity hafa azontsika vakina ao Ny aloky ny angidimby (LSDH), tena naniry ny hanandrana an'ity distro ity aho, saingy hitako fa manana olana aho:
Toy ny fatrany bandwidth voafetra hatrizay (ny ifotony indrindra).
Tsy afaka nampiasa fonosana voasoratra ao amin'ny Gtk aho.
Ary mety ampiako hoe manana fanohanana 64 kely fotsiny izy, fa ho ahy izao dia tsy olana izany.
Noho izany .. amin'izao fotoana izao tsy mieritreritra an'izany akory. Ny zavatra hizahako toetra dia ny kanto azontsika jerena Ity rohy ity.
Ampidino ny Chakra 2013.02
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Azonao atao izao ny misintona ny Chakra 2013.02 "Benz"
Isaky ny mieritreritra matotra kokoa momba ny fanandramana chakra aho, satria nanandrana nametraka Arch linux tamin'ny fomba arivo sy iray tamin'ny kapila mafy SSD aho ary tao aorinan'ny fametrahana azy dia nanome ahy hadisoana foana aho, manaraka ny wiki amin'ny taratasy.
Ny tena mahakivy ahy dia ny filazan'izy ireo matetika fa mbola alpha izy io, saingy hey, hizahako azy amin'ny milina virtoaly hahitako ny fomba fiasan'izy io.
Efa ela aho no namaky anao ary tena, miarahaba anao amin'ny bilaogy, ny tsara indrindra misy amin'ny gnu / linux.
PS: Na dia tsy asehon'ilay kisary aza izany dia mampiasa ny Debian 6 aho, iray amin'ireo trano fikirakirana mafy indrindra notsapako.
Misaotra nijanona ary naneho hevitra 😀
Eny, tsy haiko hoe avy aiza ny Alpha, Chakra dia manaraka ny filozofia KISS ary toy ny reniny distro (na dia misaraka tanteraka aza izy ireo ankehitriny) dia Rolling Release ka tsy misy na inona na inona avy amin'ny alpha. Manoro hevitra anao aho hanandrana azy, io no iray amin'ireo distro tsara indrindra miaraka amin'ny KDE!
Salama, manana Chakra napetraka ao amin'ny solosaiko mandritra ny efa ho 1 taona aho (herintaona misesy ho ahy dia fotoana be dia be ...) ary afaka manome toky anao aho fa tsy manova na inona na inona aho amin'izao fotoana izao! Ary efa nandalo Ubuntu, Mint, LDME, Archbang… aho. fa ny fahamarinan-toerana ananako ao Chakra dia mbola tsy tao hatramin'ny Mint 8, ary momba ny "alpha" hoy ianao avy amin'ny installer (Tribe) dia efa an-taonany maro ny distro ary miasa mahatalanjona ary miaraka amin'ny fanovana ny Artwork namboarina nataon'i «Marcel" Toa sarimihetsika izany, farafaharatsiny ho ahy.
Manana izany amin'ny booty roa amin'ny SSD aho ary afaka milaza aminao aho fa ao anatin'ny 10 segondra dia apetraka ny birao, mandrosoa.
Azonao atao ny mizara ny Zavakanto .. Marcel tsy te-hamoaka izany hahaha ..
"Tsy afaka nampiasa fonosana voasoratra tamin'ny Gtk aho."
Raha mitady hanasongadina zavatra iray i Chakra, dia eo amin'ny fampidirana ireo fonosana Gtk amin'ny birao KDE SC io.
Eny ry malalako, toa tsy hitako izay mifanohitra amin'izay. Azoko tsara fa ny fampiasana rindranasa GTK dia mila ampidirinao tanana (tsy haiko raha manangona) na mitady ny solony voasoratra ao amin'ny Qt .. Tsara ny manazava ity olana ity 🙂
Azonao atao ny mampiasa ny rindran-damina GTK fa tsy amin'ny fomba "ofisialy", izany hoe, amin'ny ankapobeny dia ny KDE / Qt ny zava-drehetra, avy eo manana ny Bundles ianao, izay ny fampiharana GTK dia nomen'ny Chakra ofisialy (izay vitsy, eo amin'ny 20 eo ho eo. Heveriko fa na dia izy ireo aza no malaza indrindra ary tsy miankina ny fiankinan-doha amin'ny GTK, "click'n'run) izy ireo ary farany manana ny tahiry CCR ianao," Chakra Community Repository, saingy tsy ofisialy izany, an'ny fokonolona, eo ny tsirairay afaka mampakatra fampiharana.
Na dia misy aza ny rafi-pifidianana ka ny tena mifidy - amin'ny fitsipika- dia ireo izay mety aminao indrindra na ireo ofisialy ampakarin'ny mpamolavola. Manantena aho fa mazava kokoa izao ny zava-drehetra!
Hmm, misaotra tamin'ny fanazavana. Ny sasany tamin'izay azoko tsara noho ny lahatsoratra nolazaiko etsy ambony.
Ity misy famerenana iray avy amin'ny namana Jen0f0nte izay manazava tsara izany rehetra izany.
Chakra no ampiasaiko ary mahavariana izany.
Araka ny nolazain'izy ireo tamin'ny fanehoan-kevitra hafa, afaka mampiasa programa GTK ianao, na dia manana toerana disk kely kokoa aza izy ireo nefa maivana (toa somary be lavitra noho ireo distro hafa amiko io.
Manana Gimp sy Inskape aho, saingy azo apetraka izy ireo: Chrome, Chromium, Firefox, Audacity, Eclipse, Pidgin, Thunderbird, Hugin ankoatry ny hafa. Ary tsy ilaina ny manangona, mora kokoa noho ny mametraka avy amin'ny repositories aza miaraka amin'i pacman, sokafy fotsiny ny manager "Bundle" ary kitiho ny "install"
Amin'ny maha 64-bit oriente azy ireo, dia manao asa tena tsara hanatsara an'ity maritrano ity izy ireo. Tsy afaka nampiasa KDE mihitsy aho tamin'ny ankamaroan'ny sary mihetsika ao amin'ny distro hafa !!
Recommended be !!! 😀
Marina izany, amin'ireo fonosana dia ny firefox sy amule ihany no ampiasako, ny ambiny dia rindranasa zanatany.
Tena tiako ny chakra, raha ny tena izy dia ilay distro tiako indrindra fa rehefa tsy nanohana ny masinina 32-bit intsony izy ireo dia najanoko ny fampiasako azy, mahamenatra, saingy faly aho izao miaraka amin'ny andohalambo
Te-hametraka chakra aho fa miaraka amin'ireo trano fitahirizana andohalambo ... tsy fantatro raha ho azo atao izany satria talohan'ny zanaka chakra dia zanaka vavin'i hehehe
Tsia, tsy azo atao izany, manana toerana fitahirizan-tena manokana i Chakra ary na dia samy mampiasa pacman ho mpitantana fonosana aza izy ireo, ny pacman an'i Chakra sy ny an'i Arch izao dia samy hafa sy tsy mifanaraka.
Mahamenatra satria ny fametrahana chakra dia mora kokoa noho ny arch ... na izany aza, aleoko mifikitra amin'ilay distro ray aman-dreny lol
Hatramin'ny nanandramako azy roa volana lasa izay dia tena gaga aho, izy no KDE voalohany miasa ho ahy amin'ny netbook miaraka amina Intel Atom N470 sy 2 GB RAM, avy eo dia manohy mampiasa azy io aho izao, izao KDE 4.10 miaraka amin'i nepomuk! . Ny antenaiko dia ny famoahana ny mpitantana fonosana Akabei vaovao (ao amin'ny alpha 2 ankehitriny) miampy azy io dia hanohana deltazy zypper!.
PS: Elav fanitsiana, Blog an'i Malcer fa tsy an'i Marcel ...
Miala tsiny amin'ny fametahana kopia fa eto aho dia maneho ny hevitro fa efa navelako tamin'ny pejy hafa:
Chakra Claire no nampiasako volana vitsivitsy lasa izay ary na dia voadona tamin'ny tontolon'ny sary sy ny hafainganana aza aho; Nanao korontana tamin'ireo repositories aho ary nametraka programa, (newbie amin'ny Linux aho) ka nofafako ary nametraka Kubuntu 12.10 x64 izay hitako fa tsy misy fahasarotana ny zava-drehetra.
Momba an'i Benz efa napetraka ao amin'ny masiniko; Tsy tiako ny Calligra noho ny maha "crude" azy ary tsy mametraka LibreOffice 3.6.5 araka ny doka tao amin'ny pejin'izy ireo dia nandika ianao.
Marina fa ny fahadiovana ihany no tadiavin'i Chakra amin'ny rafitra fiasany, izany no mahatonga ireo bundles sy CCRs na dia mora apetraka aza izy ireo (fa ny Thunderbird sy ny hafa kosa mbola amin'ny teny Anglisy) dia mahatonga ahy ho miniHD fa rehefa manokatra Dolphin aho; Miseho tsirairay izy ireo, (korontana tena ratsy tarehy hoy aho) ary tsy isika rehetra ihany no mahay manangona fonosana ary mampakatra azy io amin'ny CCR na mahita Qt mitovy aminy satria tsy misy; ary mahamenatra, mametra ny fizarana tsara amin'ireto andinindininy kely ireto, ampitahako amin'ny vondrona lafo vidy; Fa raha afaka miakatra azy dia tsy maintsy manana halavany, lanja, haben'ny kiraro, lokon'ny volo sy maso sns ... ianao avy eo ... mandehana midina na mahazo kilao vitsivitsy, midina na miakatra vitsivitsy santimetatra, ovao ny lokon'ny volo sy ny maso ary ampiasao ny kiraro mitovy habe aminy ary avy eo; raha afaka mitaingina bus ianao. Ka? Miatrika distro «elita» izahay.
Tiako ny Chakra, ary hajaiko ny foto-kevitra ijoroany, saingy tokony hanampy bebe kokoa izy ireo mba hahafahanay hifandray aminy sy handray anjara amin'ny lafiny sasany.
Avelako ianao (miaraka amin'ny famelan-keloka avy amin'ny Administrator an'ny pejy), rohy mankany amin'ny famaritana tena tsara momba ity fizarana ity, izay nanampy ahy betsaka; ary antenaiko fa maro amin'ireo vaovao na tsy mahalala Chakra no manampy azy ireo hahatakatra.
Tsy distro elitista izy io, fa fizarana manaraka ny filozofian'ny KISS Arch, ary manondro tontolo iainana madio KDE, izany no mahatonga ny bundles hitsangana ary anaovana izany mba tsy "handoto" ny rafitra misy fiankinan-doha amin'ny GTK ary no mahatonga ny fisarahana fanampiny, saingy miasa izy ireo mba hiafina foana. Mikasika ny Libre Office, azo apetraka izy io, ampiasaiko, ary tratra izany satria nahavita nanangona azy ny ekipa Chakra tamin'ny fanesorana ireo fiankinan-doha gtk. Ny CCR dia eo ho an'ny rindrambaiko fanampiny izay tsy mahafeno ny fepetra takiana mba ho ao amin'ireo tahiry lehibe ary tena mitovy amin'ny AUR, raha ny marina dia misy script hametrahana rindrambaiko AUR miaraka amin'ny CCR.
Na izany aza, miverina any am-piandohana aho fa tsy fitsinjarana elitista, fa tsy maintsy takatrao fa ny niandohany dia ao amin'ny Arch sy amin'ny "The Arch Way" https://wiki.archlinux.org/index.php/The_Arch_Way ka raha tsy mieritreritra olona vaovao amin'ny linux ianao raha tsy liana hanaraka ny filozofia sy mamaky ary mampahafantatra ny tenanao.
Voalohany indrindra, nanomboka ny "Claire" ka hatramin'ny "Benz" dia be no niova. Ny iray amin'izy ireo dia ny fandikan-teny, ankehitriny dia misy bundles toa Firefox izay miaraka amina fonosana fiteny rehetra napetraka.
Ara-dalàna ny fahitanao kapila kapila ao Dolphin sy amin'ny toeran-kafa, satria ny bundles dia izay fotsiny: kapila kapila. Izy io dia foto-kevitra toa ny OS X DMG. Mba tsy handotoana ny rafitra amin'ny GTK, mizaka tena ny fampiharana (mirakitra tranomboky sy izay ilaina rehetra mihazakazaka) ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy apetraka amin'ny rafitra io, fa natokana ho an'ny ny mpampiasa. Izany, dia toy ny hoe mihazakazaka fampiharana avy amin'ny USB na zavatra toa izany ianao.
Ao amin'ny repos ofisialy Chakra dia misy mihoatra noho ny ampy amin'ny fampiasana ara-dalàna sy ny rafitra fandidiana. Ny CCR dia tsy inona akory fa famenony ho an'ireo mpampiasa izay, na dia mahalala ny loza mety hitranga amin'ity karazana trano fitahirizana ity aza, dia maniry ny hanana zavatra GTK, fitsapana, amin'ny fivoarana, avy hatrany amin'ny Git, sns. Noho izany, andraikitry ny mpampiasa ny mampiasa ny CCR , ary Chakra dia manazava tsara azy.
Zavatra iray hafa izay manazava tsara azy (amin'ny "Benz" noho ireo fandikan-teny azonao vakiana amin'ny plasmoid tongasoa) dia ny Chakra manana filozofia mazava be fa ny mpampiasa dia tokony hanao ny anjarany hianarana. Tsotra be ny chakra (ary betsaka kokoa aza raha tsy miresaka afa-tsy amin'ny fomba madio ihany), koa ny fianarana zavatra fototra 4 ananan'ny disto rehetra dia mihoatra ny ampy. Raha hametraka zavatra avy amin'ny repo ofisialy dia mila mahafantatra ny fomba fikirakirana an'i Pacman ianao (tsy misy zavatra hosoratana ao an-trano).
Etsy ankilany, azonao atao ny mametraka ny LibreOffice araka ny voalazan'izy ireo. Ao amin'ny repos izy io, ary miresaka momba izany aho teo aloha. Raha te-hahita izay rehetra ao amin'ny repo ianao hanampy anao hahita ireo fonosana "sary" kokoa ary hahafantatra izay iantsoana azy ireo, dia azonao atao ny mitady azy ireo ao amin'ny tranonkalany:
Ny Chakra dia tsy distro elitista, distro tsotra fotsiny izy miaraka amin'ny toetrany manokana sy ny heviny mazava, ary mifantoka amin'ireo mpampiasa izay mitovy hevitra aminy ary vonona hanao ezaka kely, satria tsy misy tsy ampy ny fampahalalana (Google, ny vaovao, ny misy foana ny wiki sy ny forum, ny tsy mahalala dia satria tsy tiany).
Ary ambonin'izany rehetra izany, ao Chakra dia lazainay foana (na ny ekipa fampandrosoana aza dia milaza izany) fa: raha any Chakra ianao dia mitady distro iray hafa, izay "tianao" KDE fa rehefa tonga ny manosika dia mangataka zavatra ny GTK .. . avy eo tsy distro anao izany, an-jatony maro amin'izy ireo no azo ampifanarahana tsara amin'ny zavatra tianao.
Isika izay mampiasa azy dia afaka milaza aminao fa ny KDE sy Qt ary mihoatra ny ampy "velona". Ny bundles vitsivitsy misy dia mamela antsika hanana zavatra haingana nefa tsy "mandoto" ny rafitra KDE sarobidy. Ary ambonin'izany rehetra izany, rehefa mitantana Chakra ianao dia mahatsapa zavatra: fa ny GTK eo amin'ny tontolon'ny Linux dia be loatra.
Tiako kokoa ny kanto an'ny kinova Archimedes, saingy nahitana zavatra nahafinaritra volana vitsivitsy lasa izay ary mbola tsy nokasihako ilay solosainako finday. Araka ny nolazain'izy ireo tetsy ambony, maharary ny tsy manohanako 32 bit, ka amin'ny pc dia manana kubuntu 12.04 aho.
Chakra dia fizarana tena tsara, miavaka amin'ny fiorenany sy haingana, ary mazava ho azy amin'ny fampiasana ny tontolon'ny KDE amin'ny fomba lehibe.
Satria tsy mahitsy ny mampiasa fiankinan-doha amin'ny gtk, misy ny zavatra tsy hita, nefa tsy manaisotra ny fahamendrehan'ity distro tena tsara ity.
Mahagaga ny kinova Chakra vaovao. Namaky vaovao marobe aho, nanapa-kevitra ny tsy hanavao sy hametraka avy hatrany. Ny marina, tena tsara ny fiovana ary hita maso, ary i Caledonia sy Dharma no zavakanto tsara indrindra hitako ho an'ny KDE.
Mametraka avy hatrany? fizarana mihodina io, tsy ilaina ny mamerina na inona na inona.
Tsy fikandrana io ka mila apetraka indray
Misaotra tamin'ny fanonona sy ny rohy mankany amin'ny LSDH ary arahaba soa ato amin'ny bilaogy, noho ny tsiriko ny tsara indrindra amin'ny Linux amin'ny tambajotra iray manontolo. Tsy hanampy zava-baovao izay mbola tsy nolazaina teo aloha momba ny Chakra aho, fa ireo izay mbola tsy nanandrana azy hanao izany, dia tena mendrika izany.
Izaho manokana dia tsy mihevitra azy ho "elitist", fa hafa sy mifantoka amin'ny KDE. Ireo mpamorona, mahafantatra ny fetrany ary mifanaraka amin'ny tsirony ary ny filozofia KISS, dia mametra ny tenany hanolotra ny traikefa tsara indrindra KDE ary tsy hiraharaha izay rehetra mifandraika amin'ny GTK, miaraka amina fanavakavahana roa izay efa voalaza tao anaty hevitra iray, ireo fonosana (karazana singa virtoaly izay misy fampiharana GTK mandeha amin'ny fiankinan-doha rehetra) sy ny tobim-piarahamonina CCR, izay ahafahan'ny tsirairay mampakatra fampiharana GTK izay tena ilaina, na amin'ny fanangonana na "fanafarana" avy amin'ny AUR.
Misaotra anao nijanona teo ary manazava zavatra misimisy kokoa .. Ny bilaoginao arahiko fotsiny dia mahafinaritra izy .. 😉
Chakra dia manjary lasa tany nampanantenain'ny mpampiasa KDE, resahina hatrany amin'ny laharam-pahamehana faha-2 amin'ny distrika GTK.
Haha, ny Arch + KDE SC + _fitiavana sy fahalalana_ (ireto no singa miafina) no distro KDE SC mahatalanjona mihintsy running
Ramatoa antitra, hatramin'ny fotoana nampiasako ny "oxygen-transparent-git |"
Efa maoderina kokoa, ny lohahevitra nampiasako hatramin'ny omaly:
Ary farany ny lohahevitry ny * OS tsotra * * (saina @eLav!):
Ny zavatra tsara indrindra dia maivana toy ny Openbox (eny, saika) ary manidina izy!
Mampatahotra ny endritsoratra amin'ny birao.
Raiso izy ireo, tonga lafatra fotsiny i DejaVu Sans, tsy misy antialiasing mampihetsi-po hanadala.
Azonao antoka fa mampiasa ny Comics Sans na Papyrus !! xD
Marina izany. DejaVu Sans dia tsara .. Nampiasa Ubuntu Font aho taloha, fa izao kosa mampiasa ireo na Liberation Sans ..
Mahafinaritra ny endritsoratra Ubuntu, ny olana dia amin'ny haben'ny ampiasako azy ireo  tsy mifanaraka tsara aho, amin'ny ankapobeny dia azo jerena tsara izy ireo manomboka amin'ny 11pt sy miaraka amin'ny antialiasing.
Nihaona tamin'ny Liberation aho tamin'ny alàlan'ny openSUSE ary manana ny olana aho fa ny maha endri-tsoratra miolakolaka (1/4 toerana kely kokoa no ampiasain'izy ireo noho ny Sans / DejaVu Sans / Bitstream Vera Sans) dia niampita ny masoko 😛
Ny zava-drehetra ankoatry ny fanovana antontan-taratasy sy endri-tsoratra monospace: 8pt
Ed. ny antontan-taratasy: 9pt
Endritsoratra namboarina: 9pt
Mahamenatra fa mbola tsy vonona ny font Oxygen. Mandritra izany fotoana izany, hatsao ity fitoeram-bokatra ity:
Mandehana any amin'ny GWF / 0.2.3 ary apetraho izay misy. Tsara tarehy io typeface io.
Tahirin-kevitra tena tsara .. Hataoko izany 😀
Izaho dia nijery ireo sary .. Ny lohahevitra Elementary ho an'ny Aurorae tsy tiako rehefa manao ilay effets Hover eo amin'ny bokotra ..
Marina izany, tsy tsikaritro ...
Raha mahita lohahevitra fototra mety tsara ianao dia ampitao anay ny fampahalalana 😉
Nanao ny ahy manokana aho tamin'ny alàlan'ny Dekorator ..
Ellery dia hoy izy:
Roa taona lasa izay raha nampiasa arko aho, amin'ny maha mpitantana ny birao ahy dia nandeha foana aho ho an'ny xfce, gnome, gnome shell, mate, kanelina sns, tsy mbola nampiasa KDE mihitsy aho fa rehefa nahita an'ity lahatsoratra ity ary namaky ireo fanehoan-kevitra tena tsara momba ilay distro nolazaiko hoe, maninona raha andramana ny KDE amin'ity distro ity, efa nampiasaiko nandritra ny ora roa aho ary tsara be izany. Tsara ny KDE nefa tsy mikasika na inona na inona, na olana, niasa ny zava-drehetra tamin'ny fotoana voalohany nahitana izay nitranga tao anatin'ny roa herinandro, izaho holazaiko aminao.
Mamaly an'i Ellery
Tongasoa eto amin'ny klioba, tonga lafatra fotsiny ny KDE SC ao amin'ny Arch: hazavana, varatra haingana, mafy
Saika nandresy lahatra ahy ianao tsy hanandrana an'ity chakra vaovao ity.
Ka amin'ny zavatra niainanao dia haingana kokoa noho ny Chakra ny Arch + KDE?
Tsy nanandrana an'i Chakra Benz aho, saingy afaka milaza aho fa haingana kokoa ny Arch + KDE raha oharina amin'ireo distros rehetra efa nanandramako.
+1 saika ny zava-drehetra afa-tsy:
Manantena izahay ny hahita ny .9 na 1.0 an'ny Manjaro KDE sy ny fanontana hafa, heverina ho OOTB, hahitana raha manana fampisehoana tsaratsara kokoa noho ireo ambiny distro izay notononinay anarana izy ireo.
Windows 7 mihazakazaka malefaka kokoa sy haingana kokoa noho ny ankamaroany, raha tsy izany rehetra izany dia ny OOTB distros. Ok, Windows dia rafitra voafetra be raha oharina amin'ny GNU / Linux, saingy inona no fanandramana farany ampiasain'ny mpampiasa izay dinihinay fa tena tsy maninona ny fetran'ny Windows satria ny mpampiasa farany dia tsy mampiasa ny sisa amin'ny fampiasa nomen'ny rafitra GNU / Linux, ny kely indrindra farafaharatsiny hampivelatra ny asanao. Mampitaha ny Windows 7 amin'ireo distros rehetra ireo dia mihontsina izy ireo.
. farany: mila manandrana mametaka sy mampandeha ireo subsystem rehetra aho izay heverina fa mampihetsika ireo disro ireo ao amin'ny Acrh + KDE SC hahitako ny lanjan'ny rafitra, na dia milaza zavatra aminao aza aho:
Ao amin'ny KDE SC 4.10 ananako ny serivisy rehetra navadika afa-tsy i Kirc satria tsy mampiasa fanaraha-maso lavitra amin'ny solosaina findainy aho, dia mbola daemon hyper hyper ihany koa ka tsy heveriko fa misy fiovana lehibe.
.Arch dia mampiasa systemd izay mamela ny entana daemons 'amin'ny sidina', izany hoe rehefa manandrana mampiasa ireo daemons voalaza ireo rindranasa: tsy misy isalasalana fa io endri-javatra io ihany no mahatonga ny rafitra hazava kokoa hatrany am-piandohana satria tsy mavesatra amin'ny izay rehetra mety ilain'ny olona iray dia ataovy araka izay ilainy.
Tena tsy fantatro ny fiasan'ny distro atrehiko ho toy ny bloatware saingy mila mavesatra amin'ny tenany izy ireo satria ao amin'ny rafitra misy ahy misy serivisy maro mihazakazaka any aoriana ny zava-drehetra dia haingana O_O
Dafuq? Mieritreritra aho fa nihetsika kely ny fanehoan-kevitra @msx
isaky ny te-hanandrana Chakra aho (noho ny fahalianana liana fotsiny) dia hitako fa mavesatra izy io, teeeerriiiibely mavesatra ary mibontsina tanteraka, ary izany no fotoana vitsy nandehanan'ny Foko (ny mpiorina) satria ny ankamaroan'ny fotoana dia nipoaka ny zavatra rehetra teo afovoan'ny fametrahana - avy amin'izany dia manamora ny taona.
Azoko atao aminao ny mampidina sy manandrana ny Chakra, angamba nihatsara be izy io, angamba zavatra tena tianao izany, misy ny safidy hafa raha toa ka rafitra mampahazo aina anao izany.
Ankehitriny, misy zavatra marina ary tsy maintsy raisina: ny olona, ​​amin'ity tranga ity, ny mpampiasa solosaina, dia fehezin'ny traikefa manokana amin'ny fampiasana izay amolavolany ny foto-kevitra ankapobeny, diso hatrany.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa Windows dia zatra loatra ny fianjerana sy ny hadisoan'ny rafitra ary ny fisian'ny malware isan-karazany ka mino izy ireo fa ++ lojika sy ara-dalàna raha tsy mahomby ilay rafitra ary manana olana ary mazava ho azy fa lojika sy ara-dalàna izany. "Virosy iray lasa virosy" ++
TSIA, TSY MISY tovovavy, TSY LOGIKA IZANY, IZAO NO NAMPIASAANA ANAO ARY IZAY IHANY NO FANTATRAO noho ny tsy fahampian'ny traikefa, ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra amin'ny nomerika na antony hafa. Syllogism diso izany, diso ny tiako holazaina:
(tena mahaliana ilay pejy, atoro anao!)
Toy izany koa, Chakra mirona ho pigeonholed toy ny maivana distro.
Umm… hazavana ampitahaina amin'ny inona?
Raha ampitahaina amin'ny openSUSE? Mety ho izany, ny openSUSE dia rafitra mavesatra sy sarotra.
Raha ampitahaina amin'ny Kubuntu? Heveriko fa saika tsy misy fahasamihafana. Mamonjy ny fart Kubuntu - ary hitako fa tsy nisy niova hatramin'ny kinovan'ny 9.10, izay no fotoana farany nomeko azy - Kubuntu dia tsy "mavesatra" (amin'ity resaka ity), mipoaka hatraiza hatraiza nefa tsy mavesatra izany.
Raha ampitahaina amin'ny Mint? Ny chakra dia mety mavesatra kely.
Raha ampitahaina amin'ny Sabayon? Holazaiko fa mitovy izy ireo.
Raha ampitahaina amin'ny Fedora? Mavesatra ny chakra.
Raha ampitahaina amin'ny Mageia / Mandriva / ROSA? Tsy fantatro, tsy nampiasa ireny distros ireny mihitsy aho.
Raha ampitahaina amin'ny kajy Linux? Tsy azo sakanana ny kajy, Chakra dia sprinter Olaimpika eo akaikin'io distro io.
Raha ampitahaina amin'ny Debian, Gentoo, Slackware na Arch + KDE SC? Chakra dia hipopotama matavy be mitady ny hiampita an'i Avda. 9 de Julio mandritra ny ora pico
Chakra dia azo antoka fa hanana toetra tsara hafa izay manome fahafaham-po ny mpampiasa azy, fa raha distro mailaka sy maivana ilay tadiavinao dia tsy maintsy ataonao any an-kafa izany.
Averiko ihany: ny mpampiasa azy dia mety ho tena resy lahatra fa distro maivana, haingana na mailamailaka, hanamarinana fa ilaina ny mampiato ny hazakazaka amin'ny elefanta manintona sy ny makamba notapahina.
Miankina amin'ny fampitahanao azy io daholo: Chakra dia bloatware.
* hypothèse 😛
Tonga ny thesis aorian'ny ¬¬
«Raha ampitahaina amin'ny Debian, Gentoo, Slackware na Arch + KDE SC? Chakra dia hipopotama matavy be mitady ny hiampita an'i Avda. 9 de Julio mandritra ny ora be dia be.
Ity no notadiaviko, ny ambiny dia miampy izay ankasitrahana indrindra.
Debian dia manome maimaika ahy, mivazavaza amiko i Gentoo, saingy miaraka amin'ny Slackware dia mampatahotra ahy be ry zareo, Arch rehefa avy nametraka azy in-2 tamim-pahombiazana ary kamo XD ihany aho saingy azo antoka fa io no hizahako toetra KDE 4.10 miaraka amin'ny 🙂
Ianao koa dia tarihin'ny traikefa manokana sy fampiasana manokana. Samy hafa ny fomba fizarana amin'ny solosaina samihafa. Noho izany dia tsy afaka mamela ireo fanehoan-kevitra mahery vaika ianao raha tsy milaza ny marina. Efa nanandrana distro maro aho ary tsy mitondra tena araka ny filazanao azy ireo (ary azo antoka fa tsy mandainga ianao). Ohatra, i Fedora dia mandady sy midona amin'ny iray amin'ireo masiniko ary miasa tsara amin'ny iray hafa.
Etsy ankilany, marina ny anao amin'ny tapany farany amin'ilay hevitra fa tsy rariny ny mampitaha ny Arch Linux, Gentoo, Debian na Slackware miaraka amin'ireo distro OOTB ho an'ireo mpampiasa farany. Raha mividy fiara mihazakazaka ianao (tsy misy fanamoriana fiaran'ny mpandeha hampihenana ny lanjan'izy ireo) dia handeha haingana kokoa noho ny mifanila aminy izany. Ny olana dia rehefa te-hihaino radio ianao dia apetraho ny aircon, alao ny mpandeha, ... tsy maintsy ampidirinao izay tsy hita ao aoriana. Ka aza ampitahanao ny fiara ho an'ny fiara mihazakazaka "ton".
Ianao koa dia voafehin'ny traikefa manokana sy manokana momba ny fampiasana. Samy hafa ny fomba fizarana amin'ny solosaina samihafa. Noho izany dia tsy afaka mamela ireo fanehoan-kevitra mahery vaika ianao raha tsy milaza ny marina. Efa nanandrana distro maro aho ary tsy mitondra tena araka ny filazanao azy ireo (ary azo antoka fa tsy mandainga ianao). Ohatra, i Fedora dia mandady sy midona amin'ny iray amin'ireo masiniko ary miasa tsara amin'ny iray hafa
Ekena! Na izany aza, ny olan'ny vesatra hitako ao amin'ireo distro izay fariparitako dia nanjo ahy tamin'ny solo-sainako manokana - sy ireo AIO ambany farany ambany, na dia tsy nisaina aza ireo tranga farany ireo satria tsy ho marin-toetra na kendrena izany. .
Marina tanteraka ny filazanao fa misy heriny be ny HW ary ny distro izay mandady amin'ny masinina iray dia mety tsy misy kilema (na dia masinina kely kokoa aza).
Amin'ny solosaina nohamariniko (ary manamarina aho mandraka androany) fa ireo distros ireo dia mandady:
* MOBO Intel G-41ND, 4 GB, QuadCore 5700 amin'ny 2,66Ghz, 4gb RAM, Ai Sapphire 1 GB DDR3 board.
* MOBO Intel G-51, 4 GB, QuadCore 5900 amin'ny 2,66ghz, RAM 4gb, birao NVIDIA ... zavatra 😛
* HP Pavilion dv7 4285cl Norebook: MOBO Intel, i5 480 1st gen amin'ny 2,66ghz, Intel + ATi boards, 8 GB RAM.
* Mety tsy dia marim-pototra ny andinindininy saingy eo ho eo amin'ny HW an'ny ekipa tsirairay avy izy ireo ary mieritreritra aho fa afaka mahazo hevitra momba ny HW izay mihazakazaka ny distros.
Izao rehefa miteny ianao hoe:
“Etsy ankilany, marina ny anao amin'ny ampahany farany amin'ilay hevitra fa tsy rariny ny fampitahana ny Arch Linux, Gentoo, Debian na Slackware miaraka amin'ireo distro OOTB ho an'ireo mpampiasa farany. Raha mividy fiara mihazakazaka ianao (tsy misy fanamoriana fiaran'ny mpandeha hampihenana ny lanjan'izy ireo) dia handeha haingana kokoa noho ny mifanila aminy izany. Ny olana dia rehefa te-hihaino radio ianao dia apetraho ny aircon, alao ny mpandeha, ... tsy maintsy ampidirinao izay tsy hita ao aoriana. Ka aza ampitahanao amin'ny fiara mandeha amin'ny fiara «hazakazaka» ny fitaovana ».
Tsy tena marina na marina izany ary hiezaka aho hanazava ny momba ahy vetivety:
Ny zava-misy fa ny distro dia manondro ny OOTB dia mitaky koa ny fifanakalozana eo amin'ny fampiasana sy ny tombony, na izany aza ny olana _base_ amin'ny ankamaroan'ny distrikan'ny OOTB dia ny tsy fananganana madio na fanatsarana na, tsotra, mifototra amin'ilay namboarina no tsy tsara.
Ohatra iray mazava ny KDE amin'ny Debian, fa na dia ho an'ny mpampiasa rindrambaiko nohavaozina (toa ahy aza!) Tsorakazo tsy fananana kinova farany, mbola manome lanja azy fa miasa toy ny landy, hazavana, tonga lafatra ary tena Kubuntu hafa, izay mahatsapa rhinozera mandringa hatramin'ny voalohany.
Amin'ny fandinihana izay tsy mifanaraka aminao dia ny Arch, Debian (minimal), Slack na Gentoo dia fiara mihazakazaka raha oharina amin'ny fiara an-dalambe.
Ny tsy fitoviana lehibe amin'ny hevitro momba ireo distros ireo raha ny amin'ny sisa (miresaka tetikasa lehibe isika, misy ny diso toa ny SliTaz na Gobolinux izay tena tsara) dia ireo distros ireo dia natao hiasa tsara hatramin'ny voalohany, ka na ianao aza ampio aorian'izay Ny rindrambaiko rehetra tadiavinao dia mbola hiasa tsara, ohatra iray mazava tsara ny Slackware izay manolotra anao hametraka ny distro feno, manodidina ny 6GB, kanefa ny birao KDE SC dia maivana be, na firy na firy ny rindrambaiko ampidirinao na «radio, aircon »sy ny hafa (mpandeha mitondra ny rehetra 😉
Aorian'ny fampitahana anao dia ekeko fa ny distrikan'ny OOTB dia manandrana manampy na dia "valizy", "hook hook" (raha sanatria) ary maro hafa, fa ny olana lehibe amin'ireo distros ireo dia ny endriny manelingelina, ny voam-bavony, ny fanapahan-kevitr'izy ireo manatsara sy ny zavatra rehetra. izay mahatonga azy ireo ho tonga Levita tsy mamokatra.
Amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka amin'ny KDE SC ao amin'ny Arch a Chromium aho (farany azo antoka) miaraka amin'ny fantsona 35 misokatra, Yakuake + tmux, Kontact (manaparitaka loharano 100 sy ny Gmail natambako), Nepomuk miaraka amin'ny zava-drehetra navadika (birao semantis, index index, mailaka fanoratana, sns.), Telepathy, Basket ary plasmoids maro hafa, Google Earth nohafohezina, Kaliber misokatra amin'ny birao virtoaly iray hafa ary Clementine milalao mozika ary ny fandraisan'andraikitra sy ny fiasan'ny birao dia mitovy amin'ny 5 ora lasa izay rehefa naka ilay hibernation aho milina.
Raha ny marina rehefa manoratra aho dia ny fampiasana ny rafitra dia:
ambony - 02:59:19 hatramin'ny 3:11, mpampiasa 3, salan'isan'ny entana: 0,14, 0,17, 0,22
Asa: 270 total, 2 mihazakazaka, 268 matory, 0 nijanona, 0 zombie
% Cpu (s): 3,1 us, 1,0 sy, 0,3 ni, 94,7 id, 0,9 km, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: totalin'ny 7974596, 6029488 efa niasa, maimaim-poana 1945108, buffer 231244
KiB Swap: 8388604 total, 0 ampiasaina, 8388604 maimaim-poana, 2057924 cache
Ny tiako holazaina dia hoe raha tsy mampiasa distro am-bifotsy amin'ny zava-bitan'ny mediocre isika dia mamorona traikefa mitovy amin'ny fampiasana / mpampiasa amin'ny alàlan'ny distro voaporofo izay voaporofo fa anisan'ireo voatanisa etsy ambony, dia hanana rafitra miaraka amina fampiasa mitovy amin'ny OOTB fa betsaka, averiko indray, * maivana kokoa, malefaka, milamina ary mailaka.
Hitanao fa 3 fa tsy 5 ora! xD
@msx, OK. Mampiasa Debian + KDE aho, miasa ho ahy toy ny tselatra varatra izany, saingy zavatra tsotra toy ny fijerena sarimihetsika DVD (na fampihetseham-po Bluetooth) dia manery anao hanampy fanampiny (ary tsy ny rehetra no tia siansa / mekanika momba ny solosaina). Ny mpampiasa tsotra dia tsy te-hanao izany. Heveriko fa tsy mora ny manomana rafitra OOTB nohatsaraina ho an'ny solosaina maro ary vonona ny hahafantatra ny ankamaroan'ny peripheraly, ny protocole ary ny endrika izay ilain'ny mpampiasa farany. Netrunner dia mandefa dingana marobe izay mandratra ny zava-bita ankapobeny (saingy misy antony izy ireo eo). Etsy ankilany, maivana be ny LMDE KDE fa sendra banga hafahafa ianao. Tsy mora ny mamolavola rafitra iray ho an'ny mpihaino rehetra. Chakra, Kubuntu, openSUSE, PCLinuxOS, Linux Mint,… dia mora ampiasaina distros izay mendrika ny fanekena antsika. Toa be loatra amiko ny fiantsoana azy ireo bloatware.
PS: Misy fiara mihazakazaka manana toerana iray ihany (ho an'ny mpamily). Jereo NASCAR.
Amin'izao fotoana izao dia mizaha toetra ity chakra ity aho, tsikaritro fa betsaka kokoa noho ny ubuntu miaraka amin'ny kde, ny hany zavatra tsy mandeha amiko manokana dia ny calligraphic, izay tsy mamela ahy hitahiry amin'ny endrika .doc.
Te hampiasa azy io aho rehefa tonga, saingy tsy maintsy nametraka libreoffice ho azy aho.
Ny zavatra hafa tsikaritro dia ny hafenoko tsy manafana toa ny ubuntu.
Ubuntu 12.10 tsy dia mafana loatra ary raha mampiasa PowerTop ianao hametrahana ireo ampahany amin'ny masininao izay tsy ampiasainao amin'ny maody ambany dia lasa mafana be izany.
Amin'ny lafiny iray hafa dia marina izany, zavatra nataon'izy ireo tamin'ny kernel Chakra amin'izao fotoana izao-sy ny fizarana iray manontolo- mba hijanonana ho mangatsiaka ara-bakiteny mandritra ny ora maro ilay solosaina finday na dia mampiasa Chrome / Chromium aza (fantatsika fa mahery tokoa amin'ny loharanon-tsoratry ny PC) ary fampiharana maromaro hafa.
Manandrana an'i Chakra amin'ny cd live aho ary tena mandeha tsara izany, heveriko fa apetraka amin'ny fotoana iray.
Plymouth tsara ho an'i Mageia
Fomba hianarana fiteny mampiasa rindrambaiko maimaim-poana - fizarana 1